Uhlalutyo lomxholo: Ukuphela kokuphela kolawulo lweeCommerce kwiiBrands kunye neeRetailers | Martech Zone
Uhlalutyo lomxholo: Ukuphela kokuphela kolawulo lweeCommerce kwiiBrands kunye neeRetailers
NgoMgqibelo, Novemba 18, 2017 NgoLwesine, Meyi 7, 2020 Douglas Karr
Abathengisi abanamajelo amaninzi bayakuqonda ukubaluleka komxholo wemveliso echanekileyo, kodwa ngamashumi amawaka amaphepha emveliso ongezwe kwiwebhusayithi yabo yonke imihla ngamakhulu abathengisi abohlukeneyo, phantse akunakwenzeka ukuba uyibeke iliso kuyo yonke. Kwiphepha le-flip, ii-brand zihlala zijongana nezinto eziphambili ngokubaluleka, zisenza kube nzima kubo ukuqinisekisa ukuba uluhlu ngalunye luhlala lusexesheni.
Umcimbi kukuba abathengisi kunye neempawu zihlala zizama ukujongana nengxaki yomxholo weemveliso ezingalunganga ngokuphumeza isisombululo senqaku elinye. Banokuba netekhnoloji ye-analytics enika ukuqonda kwiingxaki zoluhlu lweemveliso, kodwa ababoneleli ngezixhobo zokulungisa imiba yomxholo ngokufanelekileyo. Kwelinye icala, abanye abathengisi kunye neemveliso banokuba nesiqulatho somxholo esinezixhobo zokulawula kunye nokuhlela imiba yomxholo wemveliso, kodwa ayibonisi ngokuthe ngqo ukuba loluphi ulwazi olufuna ukuhlaziywa kunye nendlela yokuyihlaziya.
Abathengisi kunye neempawu basebenza nazo zifuna zombini uhlalutyo kunye nolawulo lomxholo wemveliso ukubonelela abathengi ngolwazi abalufunayo ukuze baphande ngokufanelekileyo kwaye bathenge iimveliso kwi-intanethi. Umxholo wokuHlaziya sisisombululo sokuqala se-eCommerce sokuphela kokuphela esidibanisa uhlalutyo, ulawulo lomxholo kunye nokunika ingxelo konke kwiqonga elinye, ukubonelela ngexabiso kubathengisi nakubathengisi babo.
Uhlalutyo lokuqulathiweyo kubathengisi: UmthengisiSCOR ™
IVendorSCOR ™ sisixhobo esixhobisa abathengisi ukuba bagcine abathengisi babo bephendula kwimixholo yemveliso abayibeka kwindawo yabo. Isisombululo sokuqala kunye nokuphela kohlobo lwaso, iVendorSCOR ivumela abathengisi ukuba babonise abathengisi babo ukuba zeziphi iindawo ezifuna ukuqwalaselwa kwangoko kunye nokuhlelwa, ukuphucula umgangatho wesiza kunye nokukhuthaza unxibelelwano olupheleleyo kunye nenethiwekhi yonke yeemveliso. Kwiintengiso ngokukodwa, iVendorSCOR ibanceda ukuba baqinisekise ukuba amaphepha abo ahambelana nazo zombini iimfuno zomthengisi kunye nomthengi, ukonyusa ukuthembeka kwabathengi kunye namaxabiso okuguqula.
Nge-VendorSCOR, abathengisi bangathumela abathengisi bamakhadi kumgangatho wento nganye kwiimveliso zabo veki nganye, ukubanceda ukuba baqinisekise ukuba umxholo wabo uhlala uhlangabezana nemigangatho yabathengisi kwaye ulungiselelwe abathengi. Ngokusebenzisa ukukhutshwa kwedatha yewebhu, isixhobo sikhasa isiza ukuchonga izikhewu, iimpazamo kunye nokushiyeka kumxholo, njengemifanekiso elahlekileyo, inkcazo yemveliso engalunganga, ukunqongophala kokulinganiswa kunye nokuphononongwa, kunye neminye imiba echaphazela ukugcwala kunye nokuguqula. Isixhobo ke sinceda abathengisi ukuba babeke phambili izinto ekufuneka bezilungisile kwaye babonelele ngokuqonda kunye namanyathelo okuphucula umxholo.
Nje ukuba abathengisi bayiqonde imiba kunye nomxholo wabo kunye namathuba okuphuculwa, iVendorSCOR inceda iimveliso zenze uhlaziyo ngokufanelekileyo. Isixhobo sokuHlaziya 'isixhobo esomeleleyo se-PIM / DAM sivumela iimveliso ukugcina kunye nokuhlela umxholo wemveliso, kodwa jonga nendlela abanokukwenza ngayo ngcono imveliso nganye yokukhangela. Ukusuka apho, iimveliso zinokuhambisa ngokukhawuleza umxholo wazo kwimveliso kuwo onke amajelo azo okuthengisa kwifomathi efanelekileyo, ukuqinisekisa ukungqinelana kunye nokuchaneka kumaqonga.
Ngokubonelela abathengisi ngezixhobo abazidingayo ukuqinisekisa ukuba indawo yabo inemveliso ebalaseleyo, iVendorSCOR ekugqibeleni ivumela abathengisi kunye nabathengisi ukuba basebenze kunye ukuqhuba ukuthengisa kunye nokuzisa amava angcono kubathengi.
Ithagethi, ongomnye wabathengisi bokuqala bokusebenzisana ne-Content Analytics kumanqaku amakhadi eVendorSCOR, iya kugxila ekusebenziseni isixhobo ukwenza uphuculo ngaphambi kwexesha leholide ka-2017. Abathengisi, njengeThagethi, bajikela kwiVendorSCOR ukunceda ukuhambisa amava okuthenga kubachaphazelekayo babo bangaphakathi, iimveliso zabo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, abathengi babo.
Ukudibanisa zombini uhlalutyo kunye nolawulo lomxholo sisitshixo sokusinda kunye nokuphumelela kwindawo yokuthengisa ekhuphisanayo yanamhlanje. Ukuba abathengisi ababoneleli abathengi ngolwazi abaludingayo ukuze bathenge, baya kusuka nje baye kokuya kuthanda. Umthengisi we-SCOR akajonganga kuphela ingxaki, kodwa ikwabonelela abathengisi kunye neempawu ezisebenzisana nazo kwizisombululo ezilungelelanisiweyo nezisebenziseka lula ukuyilungisa kunye. UKenji Gjovig, VP woBambiswano kunye noPhuhliso lweShishini kwi-Content Analytics
Uhlalutyo lokuqulathiweyo kweBrand: Isixhobo sokuQala seNgxelo yokuHamba seBrands
Amanqaku ayazi ukuba abathengisi bahlengahlengisa amaxabiso ngesaziso esincinci, kodwa ngaphandle kwesoftware yokulinganisa isantya se-algorithms zabathengisi, abakwazi ukumisela ukuba ngubani umthengisi okwi-Intanethi ohambise ixabiso kuqala kunye nokuba itshintshe kangakanani.
Ingxelo yokuQala yokuQala yokuHlola ibeka esweni amaxabiso eemveliso ezifanayo kwiindawo zabathengisi abaninzi ngexesha lokwenyani, ichonga kwaye inika ingxelo ukuba abathengisi batshintsha kangaphi amaxabiso abo kwaye ngubani oqale kuqala. Njengolongezo olungenamthungo kwii-MAP esele zikhona kunye neengxelo zokuphula amaxabiso ze-MSRP, Ingxelo yokuQala yokuHamba inceda iimveliso ukuba zichonge kwaye zilandelele amathuba okuphucula umda kwaye ziqinisekise amaxabiso achanekileyo kuwo onke amajelo e-Intanethi.
Isifundo seBrand: UMatel
Ngaphambi kokubambisana ne-Content Analytics, uMatel wayesele egxile ekujongeni i-omnichannel management, kodwa wayengenazo izixhobo zokugcina ulindelo olwandayo lwabathengi kumava akwi-Intanethi.
Ukuphucula ukuthengisa kunye nokugcina ukulingana kwegama kwi-intanethi, uMattel waguqukela kuQulunqo lokuQulunqa ukuphuhlisa isicwangciso esinee-omnichannel ezintathu zeshishini labo le-eCommerce, ebandakanya:
Ukuphucula umxholo wemveliso ngokwandisa izihloko kunye neenkcazo zemveliso, kunye nokongeza amagama aphambili, ukukhangela kunye neevidiyo
Ukunciphisa amaxabiso esitokhwe ngokubonakala kwexesha lokwenyani xa iimveliso ziphuma kwisitokhwe
Ukuxhasa imali kumajelo eqela lesithathu ngokumilisela izicwangciso zokunika ingxelo kunye nohlalutyo ukunceda ukuqonda indlela yokwandisa amathuba ebhokisi yokuthenga
Ngokujongana nala manqaku mathathu entlungu, uMxholo woHlaziyo ukwazile ukuphucula amava egama likaMatel kunye nomgca osezantsi. Iimpawu ezithile zibandakanyiwe:
Ukulungiswa komxholo wee-SKU zayo ezingama-545 eziphezulu, ukuya kuthi ga kwinqanaba apho bafumana khona uMxholo woLungiso lwezeMpilo kuMxholo we-100% kuyo yonke into
Ukwehla kwamanani esitokhwe ngama-62% phakathi kuka-Novemba ukuya ku-Disemba ka-2016
Ukuphuculwa kwamaxabiso esitokhwe kubaqhubi abaphambili ngama-21%
Idale i "Mattel Shop," indlela yokuthengisa yomntu wesithathu ukukhusela ibhokisi yokuthenga xa uMattel ebengekho, oko kugcina ukulingana kwegama kunye nolawulo kumava abathengi.
Xa ujongene namawaka ee-SKU kumajelo amaninzi, ukuba nezixhobo ezifanelekileyo kunye nokudityaniswa kwedatha kwindawo enye kusinceda ukuba sikhombe ngqo apho sinokukhawulezisa khona utshintsho. -Erika Zubriski, uSekela Mongameli weNtengiso, uMatel
Olunye uphawu kunye nabathengisi abasebenzisa Uhlalutyo lomxholo zibandakanya iWalmart, iP & G, iSamsung, iLevi, iL'Oreal kunye nokunye.
tags: umxholo womxholoUkuThengiswa kweMpahlaidamaUmxholo we-ecommerceUKenji GjovigL'OrealYeLevimattelI-P & G.ipimamaphepha emvelisoumxholo wentengisoSamsungskujoliswe kuyoamanqaku omthengisiabathengisiwalmart
Novemba 27, 2017 ngo-11: 49 PM
Kwihlabathi lentengiso yedijithali kukho uluhlu olubanzi lwezixhobo zetekhnoloji yokuthengisa ezisinceda ukuba sikhule phambili. Izixhobo zetekhnoloji yokuthengisa zenza izinto zibe lula. Umxholo sifumene iBuzzsumo, iigrama njl njl izixhobo. Uyilo sineLumen 5, izixhobo zestensile njl. Kwi-HTML sine-litmus, i-inkbrush. Ukuthengisa nge-imeyile sineMailchimp. Kwi-Seo sineHref, iwatchwatch, isiCwangciso segama elingundoqo njlnjl. I-analytics sine-Google analytics. Kwimithombo yeendaba kwezentlalo sinobhengezo lwezeNtlalontle, kancinci, kulawulo lweprojekthi sine-slack, iGoogle drive njl. Zonke ezi zixhobo zidlala indima ebalulekileyo kwihlabathi lentengiso yedijithali.